अब कस्ले भन्छ यिनलार्इ पुरूष ? : १६ लाखमा लिंग परिवर्तन गरेर फर्किइन झापाकी चञ्चला - Purbeli News
अब कस्ले भन्छ यिनलार्इ पुरूष ? : १६ लाखमा लिंग परिवर्तन गरेर फर्किइन झापाकी चञ्चला
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७३ समय: ७:४९:०६
मोरङ,१७ मंसिर । थाइल्लेन्डमा गएर केही महिना अगाडी ‘सेक्स चेन्ज, अप्रेसन गरेपछि चञ्चला सुब्बा लाई अब कसैले पनि पुरुष हो भन्नै सक्दैन । विराटनगर विमान स्थ्लमा पत्रकारसंगकाे अचानक भेटमा सुब्बाले मुस्कुराउदै भन्नु भयो ,‘ रु १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर थाइल्लेन्डमा गएर लिंग परिवर्तन गरे,।
स्तन र योनीको दुबैको अप्रेसन सफल भएपछि नयाँ जुनि पाएको उहाँले बताउनु भयो । आत्मविश्वासको साथ बाच्न पाउने बल्ल भयो भन्ने भएपछि पीडा, आर्थिक सबै विर्सेको उहाँको भनाई छ ।आठ घण्टाको समयपछि सफल सल्यक्रिया भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँँका अनुसार अप्रेसनमा लिंगको मासु र अण्डकोष झिकिल्दो रहेछ । अप्रेसन गर्दा नसा चाही कुनै पनि खेर जान नदिएर त्यसलाई त्यही वरिपरी छालामा संयोजन गरी भेजिनाको आकार दिइएको उहाँको भनाई छ ।
नेपाल बैक लिमिटेड धरान शाखा प्रमुख सहित ११ कर्मचारी पक्राउ
तेह्रथुममा ७ हजार १ सय ९२ मतदाता थपिए
सुनसरीमा एकै दिन दुई जनाले गरे आत्महत्या
बाढी पिडितका लागी तरुण दलको राहत संकलन सुरू
नेपालका मालबाहक कन्टेनर र ट्रक भारतमा रोकिए
काेशीमा एकै दिन दुर्इ जनाले गरे अात्महत्या : कारण र अाफन्त खाेज्दै प्रहरी : दुवैकाे सनाखत हुन बाकी